Koormeerayaal ka socdo 32 wadan oo maanta hubiniyay qaabka doorashada ay u dhaceyso. - NorSom News
Koormeerayaal ka socdo 32 wadan oo maanta hubiniyay qaabka doorashada ay u dhaceyso.
158 kormeere oo isugu jiro norwiiji iyo ajnabi ah ayaa maanta kormeerayay qaabka ay u dhaceyso doorashada baarlamaanka dalkan Norway. 158-kan qof ayaa waxaa kamid ahaa kormeerayaal caalami ah oo ka kala yimid 32 wadan oo daafaha caalamka ah.
Kormeerayaashan ayaa hubinaya qaabka ay u dhaceyso doorashada, iyo inay waafaqsantahay xeerarka caalamiga ah ee doorashooyinka dimuqraadiga ah. Norway ayaa saxiixday heshiisyo caalami ah, kuwaas oo waajib ka dhigaya inay casuunto, isla markaana ogolaato in kormeerayaal caalami ah ay doorashada la socdaan.
Inkasta oo la wada aaminsanyahay in doorashooyinka Norway ay yihiin kuwo u dhaca qaab wanaagsan, hadana kormeerayaashan ayaa laga sugayaa inay diyaarinayaan warbixin ku saabsan doorashada, iyo waxyaabaha u baahan in la badalo ama la adkeeyo doorashada tan xigta.
Dowlada Norway ayaa sanadkan amartay in dhamaan codadka lagu tiriyo gacanta, kahor inta aana loo gudbin mashiin mar labaad tirin doono, si loo hubsado in tirada codadku ay sax yihiin.
Previous articleWali waqti aad ku codeyso ayaad heysataa ee codee
Next articleHalkan ka daawo natiijada hordhaca ah ee doorashada
(Video): Fikirkaa siyaasiinta soomaalida iyo taageerayaasha xisbiyada ee natiijada doorashada
TV2: Listhaug: Ma hubo inaan wasiir sii ahaan doono.
Madaxda xisbiyadu maxay ka dhaheen natiijada doorashada